DARAASAD: Qoyska Soomaliyeed ee aanan xitaa biilkooda awoodin waxay leeyihiin shaqaale guriga ugu shaqeeya | XORRIYA NEWS
Home Fikrado DARAASAD: Qoyska Soomaliyeed ee aanan xitaa biilkooda awoodin waxay leeyihiin shaqaale guriga...
DARAASAD: Qoyska Soomaliyeed ee aanan xitaa biilkooda awoodin waxay leeyihiin shaqaale guriga ugu shaqeeya
Qoysaska Soomaaliyeed ee aanan xitaa biilkooda awoodin ee Qurbaha laga soobiilo waxay leeyihiin shaqaale guriga ugu shaqeeya hal ama labo.
Intaan daraasaddaan aan hadda gebba gebadda ii mareyso waxaa ii soobaxdey inaan nahay dadyow caajis ( wahsi ) badan oo galaaska aan rabno inaan biyaha ku cabno, aan ugu yeerno qof kale inuu noosoo qabto taasi dadka qaar waxay u maleeyaan horumar iyo faan balse waa hooseyn shaqsiyadeed.
Gabdhaha Somaliyed Badanaa ee ku nool Kenya gaar ahaan Caasimadda Naago Kenyan ah ayaa u shaqeeya, ogsoonow waa 25 jir waa 30 jir kuleh Dhar madhaqi karo, guriga iyo suuliga iyo ilmaha intaba ma nadiifin karo, mana qaban karo shaqooyinka kale ee guriga.
Gabdhaha Cadaanka iyo Madowga iyo Kuwo indha yarta ee Aasiyaanka ah iyo Kuwa Carabta ah marka laga reebo Sacuudi Carabiya inta kale iyagaa guryohooda iyo caruurtooda xanaaneeya, cunadda karriya, guryahana ka qabta howsha.
Inkastoo shaqadda guriga waajib gooni ah ay ku aheen gabadha keliya ee ninkuna ay tahay inuu booskiisa ka qabto hadana waxaa loobaahanyahay inaan iska deyno dhaqanka culeeska iyo wahsiga.
Boqoradda sifadda lagu garto waxaa kamid ah inaysan leheen shaqaale guriga iyo caruurta u heysa.
Waalidoow ilmahaaga bar howsha iyo inay isku filnaadaan oo wax walba qof qabsan kara ahaadaan, ogsoonow intay yaryihiin waxaad ku abaabiso ayay 99% noqonaayaan wiilka bar sida loo kariyo cunadda iyo sida loo nadiifiyo alaabta iyo jikadda iyo suuliga iyo tirtiridda qolkiisa iyo goglidda sariirtiisa, si lamid ah gabadha iyadana.
Noloshu laguu sheegaayo waa isbixin iyo isku filnaasho, qaboow ayaa kajira wadanka aan joogo dhar madhaqi karo iyo suuliga iyo alaabta taasi karmarsiyo kuuma noqoneyso marka aad London iyo Toronto tagtid baraf ayaa dhacaayee maxaad u qabataa wax walba? Oo aadan u qabaneynin marka aad Nairobi iyo Muqdisho iyo Addis joogtid.
Lacagta aad kubixineysaan shaqaale, bil walba Bank dhigta sanadkii waxay idin noqoneysaa lacag badan oo aad kusameyn kartaan maalgelin yar oo fiican.
Ama ayuuto ku gal, ama intaad meel ku aruurisid hooyadaa ama sodohdaa ama aabahaa ama sodohgaa ama ninkaada ama adiga kusoo xaji.
Waxyaabaha gabdhaha somaliyed ee aan hiilka marwalba u ahay kula yaabo middaan ayaa kamid ah, kama fekeraan jeebka ninka ileen biilka iyo cunadda iyo kiradda guriga iyo lacagta dugsiga iyo iskuulka iyo macalinka guriga imaanaayo lacagtiisa ma awoodo wayyo dukaan ayuu ka shaqeeyaa wuxuu qaataa 150$ runtii Wiilasha Soomaaliyeed waxay mudanyihiin dhiirigelin iyo duco way jiraan kuwo xun balse waxaa ka badan nimanka subixii qabowga ku kalaha si ay qoyskooda ugu raadiyaan waxay cuni lahaayeen.
Inta badan xanuunadda jirka iyo lafa xanuun, iyo inay si deg deg ah u cayisho, howl la’aanta ileen xaaqidda dhulka iyo tirtiridda iyo howl qabashadda kale waxay kuutahay aala-miindo (Jir dhis) haddii lawaayo oo aad TV-ga NetFlix iska daawatto waxaa kugu dhacaysa Sokor iyo cudurro halis ah.
Gabdhaha Dunidda ku nool iyagoo umul ah ayay qabsadaan shaqadda guriga, hooyadey waxay igaga sheekeysay inay qaban jirtey howsha iyadoo umul ah sidaasna nagu sookorisey sharaf iyo karaamo nabadgalyo iyo naxariis Eebe korkoodda hayeelo Kuwa Ka Run sheegay Naagnimadooda abaalkooda magudi kareyno.
Waxaanan iloobi kareyn Dumarka Somaliyed ee Australia iyo Yurub iyo America kunool keligood inay qabsadaan howsha guriga, caruurtana xanaaneeyaan iskuulna sii geeyaan mid walba goonidiisa shaqana sii aadaan. Sharaf iyo karaamo ayay mudanyihiin, ee marka africa lajoogana sidaasi haloo dadaalo.
Soomaaliga aan xitaa biilkiisa bixin karin ee qof kale ku tiirsan waxaa qaarkood u shaqeeya, 2 adeegto. halka umadaha hormaray ay howlohooda qabsadaan iyagoo milyineero ah, Dhaqankaas caajiska ihi wuxuu aad u diley wax soo saarka Wadankeyaga iyo Dadkeyaga.
Mararka qaarkoodna haweenayda jecel inay shaqaale keensato, waxaa kudhacda in gabadha Somalida ah ama ajinabiga ninkeeda Soomaaliga guursado inbadanna goob joog ayaan ka ahaa dhacdooyin badan oo soo dhacay oo gabadhii masuulka guriga ka aheed in gurigeedii lagala wareegay.
Dumarka Soomaaliyeed iyo Ragaba waxaan ku boorinaynaa inay isbaraan inay isku filnaadaan sida ay waalidkeenaba iskugu filnaayeen.
Waxaa Qoray: Xassan Jibaar